Waayeelka Kooxda Cajuusta oo la xaqiijiyay in uu ka maqnaan doono kulanka Spurs - Jazeera FM
Waayeelka Kooxda Cajuusta oo la xaqiijiyay in uu ka maqnaan doono kulanka Spurs
Cayaariyahan Andrea Barzagli ayaa shaki wayn laga muu jinayaa inuu u ciyaari karo kulanka Kooxdiisa Juventus ay ku wajahayso tartanka Horyaalinta Yurub ee Uefa Champions League Kooxda reer England ee Tottenham Hotspur.
Labada Koox ayaa lugta koowaad ku kulmi doona Magaalada Turin habeenka Talaadada, hase ahaatee saraakiisha waaxda Caafimaadka ee Kooxda Bionconeri ayaa wali la tacaalaya xaalada Caafimaad ee Cayaariyahan Barzagli.
Barzagli ayaan ka qeyb qaadan tababarkii maanta, kaddib dhibaato dhanka muruqa ah oo kasoo gaartay lugtiisa midig, intii lagu guda jiray dheeshii Fiorentina.
Si kastaba ha ahaatee’ Kooxda Cajuusta ayaa shaki wayn ka muujinaysa Cabqariga reer Argentina ee Paulo Dybala, kaas oo aan kasoo muuqan doonin kulanka Spurs, halka xiddigaha Juan Cuadrado, Benedikt Howedes iyo Blaise Matuidi ay ka maqnaan doona kulankaas.
The post Waayeelka Kooxda Cajuusta oo la xaqiijiyay in uu ka maqnaan doono kulanka Spurs appeared first on Wararka Ciyaaraha.
← Jurgen Klopp: ‘Virgil van Dijk Wuxuu Soo Bandhigay Kubadda Cajiib Kadib Markii Oo Wajahay Kooxdiise Hore Southampton’
Serie A Team of Week →